Sheekh Kenyaawi oo Muxaadaro Wacyi-gelin ah u jeediyay Ciidamada Xoogga Dalka | Somali National Television - sntv.so
Home AMNIGA Sheekh Kenyaawi oo Muxaadaro Wacyi-gelin ah u jeediyay Ciidamada Xoogga Dalka
Muqdisho (SNTV):-Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyaawi oo ka mid ah culumaa’udiinka soomaaliyeed ayaa Maanta waxaa uu booqasho ku tagay xarunta Taliska Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed waxaana halkaasi kusoo dhaweeyay Wasiirka Gaashandhigga XFS ,Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka iyo saraakiil ka tirsan Ciidanka Xoogga Dalka.
Sheekh Maxamed Ibraahim Kenyaawi ayaa ujeediyay Muxaarado lagu wacigalinayo ciidamada xoogga dalka waxa uuna ka hadlay waajibaadka shaqo ee ka saaran qof kasta oo muslim ah dalkiisa iyo diintiisa.
Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed S/gaas Daahir Aadan Cilmi (Indhaqarshe) ayaa ka hadlay Ahmiyada ay dowlada Soomaaliya ay ku bixineyso dhismaha,qalabeynta dib u dhiska xerooyinka ciidamada ay tahay mid kor loogu qaadayo Aqoonta ciidamada xoogga dalka.
Wasiirka Gaashandhigga Xukumada Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa bogaadiyay Barnaamijkan wacigalinta ah ee sheekha u sameeyay Ciidanka, isagoona sheegay in Xukuumada Soomaaliya ay ku dadaaleyso dar-dargalinta diwaangalinta ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed oo hadda meel wanaagsan maraya.
Previous articleWasiirka Arrimaha Gudaha XFS oo soo xeray shir looga hadlayay Awoodaha Heerarka Dowladda
Next articleGuddiga Joogtada Golaha Shacabka oo shaaciyay waqtiga uu furmayo kalfadhiga 5-aad ee Golaha